Taliyaha AMISOM oo Sheegay inay kordhinayaan Howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab. - Warka gudaha Somaliya - Local News in Somalia
Home WARKA GUDAHA Taliyaha AMISOM oo Sheegay inay kordhinayaan Howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Taliyaha AMISOM oo Sheegay inay kordhinayaan Howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Johwar – Taliyaha Ciidamada AMISOM Lt Gen. Jim Beesige Owoyesigire wuxuu xilsaaray ciidamadiisa Maamul goboleedka Hirshabeel si uu u xoojiyo hawlgallada wadajirka ah ee Ciidamada Qaranka Soomaaliya ee ka dhanka ah Al Shabaab si loo helo nabadda iyo amniga.
Waxa uu ka hadlayey booqasho uu ku tagay Johwar, oo qayb ka ah qiimeynta amniga ee socdaalka dhammaan dhinacyada AMISOM ee Soomaaliya.
Lt. General Owoyesigire oo la socday saraakiil sarsare oo ka tirsan AMISOM ayaa la kulmay qaybta shan taliye Brig. Leonidas Niyungeko, wuxuu amaanay dadaalka iyo ballanqaadka ciidamada AMISOM ee gobolka Hirshabeel.
Brig. Niyungeko waxa uu sheegay in hawlgallada la qaban doono si loo wanaajiyo ammaanka guud ee degaanka, xoojiya dhaqdhaqaaqa xorta ah ee dadka maxalliga ah isla markaana awood u leh bay’ad ganacsi si ay u horumaraan.
Taliyaha Ciidanka ayaa xoogga saaray xoogagga in ay sii wataan tababarka iyo hagidda miisaaniyaddooda SNA iyada oo loo marayo qorsheyn wadajir ah, isuduwidda iyo fulinta hawlgallada sida waafaqsan qorshaha kala-guurka AMISOM.
Lt. Gen Owoyesigire ayaa sidoo kale ku booriyay ciidamada in ay xoojiyaan xiriirka lala yeesho beesha maxalliga ah iyada oo la kaashanaysa maamul goboleedyada iyo qaadida mashaariicda saameyn deg dega ah si wax looga qabto dhibaatooyinka bulshada.
Taliyaha Ciidamada, oo ay wehliyaan shan sarkaal oo ka tirsan Saraakiisha ayaa sidoo kale ugu baaqay madaxweynaha gobolka Hiiradabeelle, H.E Maxamed Cabdi Ware oo jooga aqalka madaxtooyada ee magaalada Jowhar.
Wadahadaladu waxay diiradda saarayaan xaaladda amniga ee gobolka, baahida loo qabo in la sugo ammaanka magaalada Johober iyo dadaallada xasilinta ee lagama maarmaanka ah.
Taliyaha Ciidanku wuxuu booqday Baydhabo, Beledweyne iyo Balidogle oo qayb ka ah qiimeynta socda ee ciidamada AMISOM iyo deegaanadooda.